Izibhamu ebusika ezivela ithanga, zokupheka. Ithanga elifuthiwe, ujamu, i-puree
Kusukela kumathanga akhanyayo, amanzi namanzi anempilo, ungakwazi ukupheka inombolo enkulu yezitsha. Le mifino ifakwa ekwakheni isobho, i-casseroles kanye ne-stew, kusukela ebhakeni yenza ama-dessert amnandi, i-jam, izithelo ezihlosiwe, i-baby purees nokunye okuningi. Futhi uma upheka ukudla okusemathinini kusuka ebusika, khona-ke ngisho nasezinsukwini ezibandayo ungakwazi ukujabulela ukunambitheka nephunga lale mkhiqizo oshisayo. Ake sicabange ngokunye okuphawulekayo nokulula ekuphekeni kokubulawa, kanye nesithombe sezitsha zokulungele.
Ukuthungwa kwemifino ebusika: i-caviar enomsindo nemifino
Ithanga lisetshenziselwa ukulungiselela izitsha ezisawoti. Isibonelo, i-caviar enjalo ingahanjiswa etafuleni njenge-snack, futhi ungayisebenzisa njengendwangu yecala ukuya inyama noma inhlanzi. Inzuzo ebalulekile yalesi sidlo yinto elula yokulungiselela kwayo.
Uhlu lwezithako ezidingekayo:
ithanga elisha - 1 kg
isanqante - 0.6 kg
utamatisi - 0,6 kg
anyanisi - 0.6 kg
i-garlic - amazinyo angu-6-7
amafutha e-sunflower - 6 tbsp. l.
usawoti, pepper, ushukela
Isinyathelo-nge-Isinyathelo Recipe for Pumpkin Caviar:
Anyanisi, ithanga kanye izaqathe zigeza kahle ngaphansi kompompi bese zisusa yonke ikhasi kusuka imifino. Faka ikhasi le-clove likagalikhi.
On utamatisi, yenza ukucubungula okuncane, ugcoba utamatisi ngamanzi abilayo uphinde uwahlanza kule filimu.
Gwema utamatisi ku-grinder yenyama bese uthele utamatisi ube yisitsha esifanele. Dlula i-garlic ngokusebenzisa umshini bese uxuba ne-puree ye-tomato.
Bese usika imifino esele ibe yi-grinder yenyama ngokuyihlanganisa emkhunjini ohlukile.
Lungisa ipanethi yensimbi ehlanzekile neyomile. Thela amafutha emifino phansi, udlulise ithanga nge anyanisi kanye izaqathe, ubeke isitsha esitofu, vula ishisa ngomlilo kancane. Ngemuva kokubilisa ubisi, pheka amazambane ahlambulukile ngaphansi kwesembozo imizuzu engu-20.
Bese ufake i-tomate puree ye-dish, usawoti kanye ne-sauce ukudla okumnandi, engeza pepper omnyama.
Amaqanda amaqanda amaqanda enye imizuzu engu-20-30, evuselela ngezikhathi ezithile, ukuze angashisi.
Ngenkathi imifino iphosa esitofu, geza futhi ubisize izimbiza ngamabhodlela.
Dlulisa isidlo esilungisiwe emathini bese uyigcwalisa. Gcina lezi zikhala endaweni epholile emnyama, isibonelo, emiphongolweni noma emiphongolweni.
Okuhlwabusayo futhi okuwusizo: amazambane amahle aphethwe ama-cranberries namathanga ebusika
A ithanga elimnandi, elimnandi nelomnandi elihlangene nama-cranberries omuncu adala isidlo esihle kakhulu futhi esiwusizo kakhulu. La mazambane angcolile anganikwa izingane njenge-dessert, kodwa ngokuqinisekile ukudla okunjalo kuzokujabulisa wonke amalungu omndeni. Cabanga iresiphi eningiliziwe yokuvunwa kwethanga ebusika.
Uhlu lwezithako zePumpkin Puree:
amajikijolo ama-cranberries - 300 g
ushukela - 300 g
amanzi - 1 l
isinamoni - ukunambitha
Imiyalo yokupheka ngesinyathelo-ngesinyathelo:
Geza ithanga ngaphansi kwamanzi, ususe ikhasi kusuka emifino bese uhlunga imbewu.
Beka ibhodlela lamanzi esitofu, ulinde uketshezi ukuthi ubilise bese ufaka ushukela.
Hlanganisa ithanga ngamagubhu amancane bese uwafaka ngamanzi abilayo.
Nciphise ukushisa komshini wokushisa, umboze isitsha ngesembozo bese upheka imifino kuze kube yilapho ithambile futhi ithenda. Emva kwemizuzu engaba ngu-30 kusukela ekuqaleni kokupheka, engeza isinamoni encane epanini.
Okwamanje, phinda ama-cranberries abe yi-colander bese ugeza amajikijolo ngaphansi kompompi. Bese usuka ijusi kubo bese uwuthululela esitsheni lapho ithanga lenziwe khona.
Uma imifino ithambile, futhi iningi lamathumba amanzi, uthele amanzi okwedlulele ovela epanini, udlulise ithanga libe yi-blender futhi uhlise kuze kube yilapho uhlambulukile.
Faka izimbiza ngamabhodlela. Spread amazambane ashisayo ashisayo phezu kweziqukathi, uwafake emabhodleleni bese uwafaka ngengubo efudumele aze aqede ngokuphelele.
Gcina ukudla okusemathinini endaweni eyomile, emnyama nepholile.
Ukunambitheka okukhanyayo: i-ithanga jamu ne-citrus
Kubathandi bamaswidi, sinikeza iresiphi ye-jam kusuka ehlathini nge-lemon ne-orange ebusika. Lokhu kudla okumnandi kuyothokozisa ngephunga layo elimnandi nokunambitheka okukhanyayo, futhi umbala ocebile we-orange uzophakamisa isimo sengqondo sezulu esinesibhakabhaka kakhulu. Iresiphi kanye nezitsha zezithombe zinikezwe ngezansi.
Uhlu lwemikhiqizo ye-jam:
ithanga - 1 kg
ama-oranges - 1 kg
ulamula - 0,5 kg
Isinyathelo ngesinyathelo inqubo yokulungiselela ujamu:
Izithelo ze-Citrus ugeze futhi, ngaphandle kokususa i-peel, nqamula kuqala eceleni kwendawo, bese uqeda izinqamu.
Lungiselela ithanga. Susa kuso ikhasi, ususe imbewu kanye namafayili. Gaya imifino ngamacwecwe amancane.
Emgodini ohlanganisiwe, engeza izingqimba zama-lemons, ama-orang kanye neqoma, ukufafaza ungqimba ngalunye noshukela. Shiya izithako zobusuku, ngakho bavumela ijusi.
Ngosuku olulandelayo, faka epanini emlilweni ophansi futhi upheke ijamu cishe imizuzu engaba ngu-30. Bese uvala i-hotplate bese upholisa isidlo.
Ngemuva kwalokho, khanyisa umlilo futhi uphinde ujeze i-jam kuze kube yilapho ithanga lilula kakhulu.
Ngalesi sikhathi, unakekele izitsha zokugcina. Geza uphinde ubisize izimbiza ngamabhodlela, futhi uma u-jam usulungile, usabalalise kuziqukathi nakwe-clog.
Gcoba izimbiza ngengubo efudumele ukuze uzipholise kancane kancane. Ngemuva kwalokhu, lungisa kabusha izisebenzi kusukela ehlathini ebusika kuya emiphongolweni noma emiphongolweni.
I-Amber jam kusuka kwamapheyari ezinqeni ebusika: zokupheka ezilula-imizuzu emihlanu
Ukujabulisa phakathi nobusika: izindlela zokuvuna i-mint ebusika
Ijusi le-Apple ebusika ekhaya usebenzisa i-juicer kanye nomenzi wejusi
Ijusi lempumputhe ebusika ekhaya ngokusebenzisa i-juicer futhi ngaphandle kwayo - nge-orange, izaqathe nama-apula nenyama
Indlela yokukhipha amakhowe amhlophe: ukufunda nokuvuna
Ketchup ebusika ekhaya kusuka utamatisi kanye pepper, nge anyanisi, apula, plums, "Chile". Ukuthengwa kwe-ketchup yasekhaya ebusika - izindlela zokupheka ezingcono kakhulu nesithombe
I-sauerkraut enhle kakhulu ebusika ku-3-litre izimbiza, izimbiza noma amabhakede
Amaqebelengwane amakhekhe azenzela
Izitshalo ezingaphakathi ngaphakathi kwendlu
I-Dandruff: izimbangela zokubonakala kwayo nezindlela zokuziqeda
Isibindi sezinyosi ezibabayo
Yini okufanele uxoxe nomyeni wakhe, yiziphi izihloko?
Isobho elibandayo ngekhukhamba
Izitshalo ezinomsoco zendlu yethu
Amalensi oxhumana nombala, aguqula ngokuphelele umbala wamehlo.
Indlela yokuvikela izinwele zakho kusuka eqhweni, emoyeni naseqhweni?
Izimbangela kanye nemvelo yokuqhuma ezinganeni
Iphariji ye-Buckwheat kuhhavini ye-microwave
Siqoqa imvuthu esikoleni
Ipensela ingilazi? Akusikho ngathi! Siqinisa izindonga zesifazane
Yini okufanele ngiyenze ukubuyisela othandekayo wami?
Isaladi nge-radishes namakhukhamba